बागलुङमा एउटा बोकाको मूल्य ४ लाख रुपैयाँ, अझै भाउ पुगेन ! - Himali Patrika
बागलुङमा एउटा बोकाको मूल्य ४ लाख रुपैयाँ, अझै भाउ पुगेन !
हिमाली पत्रिका २७ मङ्सिर २०७७, 8:52 am
एउटा बोकाको मूल्य कति पर्ला ? पक्कै तपाईंले भन्नुहुनेछ– केही हजार तर यहाँ एउटा बोकाको मूल्य ४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी तोकिएको छ ।
केसी पशु प्राविधिक पनि हुन् । मौरीपालन व्यवसायबाट तीन वर्षअघि बाख्रापालनलाई उनले व्यावसायिक बनाएका हुन् । उनको खोरमा अहिले पनि एक सय बाख्रा छन् ।
स्थानीय खरी जातका बाख्रामा बोयरको क्रस गराएर उनले बाख्रा पालिरहेका हुन् । यो बोका ९० प्रतिशत क्रस बोका हो । यस्तो विधिले पाल्दा खरी जातको जस्तै घाँस खाने, चर्न रुचाउने र तौल भने बोयरको जस्तै बढ्ने उनको अनुभव छ ।
केन्द्रीय भेडाबाख्रा प्रवर्द्धन कार्यक्रममार्फत तालिम पाएपछि ३ लाख रुपैयाँ लगानीमा उनले दुई वटा बोका किनेर ल्याएका थिए । रायडाँडामा अहिले १७ बाख्रा फार्म छन् । तीमध्ये १० वटा खरी बाख्राका छन् भने सात वटा बोयरका हुन् ।
‘बोयर जातको बाख्राका लागि हाडनाता लाग्ने गरी बोका लगाउनु हुँदैन । त्यसैले अब नयाँ बोका ल्याउने योजना छ,’ उनले भने, ‘नयाँ बोका ल्याएपछि यो बेच्ने हो ।’ बोयर जातमा बाख्राले एकै पटक बोका खोज्छन् । त्यसैले कम्तीमा दुईदेखि तीन वटा ब्याडे बोका आवश्यक पर्ने उनले जानकारी दिए ।
रायडाँडामा पाँच वटा बाख्रापालन समूह छन् । तिनमा आबद्ध किसानका लागि केसीले प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्छ । गत वर्ष मात्रै १५ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको र त्यसबाट ५ लाख रुपैयाँ नाफा कमाउन सकेको केसीले बताए । वडा नम्बर ११ मा वार्षिक १ करोड बराबर बाख्राको कारोबार भएको उनले तथ्यांक छ ।
वडा कार्यालयका पशु प्राविधिकसमेत भएकाले उनले हरेक महिना बाख्रासहित पशुचौपायाको उत्पादनको तथ्यांक निकाल्छन् । व्यावसायिकबाहेक घरायसी उपयोगका लागि पनि प्रायः किसानले १० देखि २० वटा बाख्रा पालेका छन् ।
वडाभरि ३ हजार ३ सय बाख्रा रहेको उनले जानकारी दिए । भूगोलका कारण अन्य पेसा व्यवसाय सम्भव नभएको र बाख्रापालन एवं तरकारी खेतीमा नगरपालिकाको पनि लगानी केन्द्रित गरिएको वडाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र गौतमको भनाइ छ ।